Nagu saabsan - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
Dengfeng Ltd waa shirkad gaar loo leeyahay oo la aasaasay 2009, kuna takhasustay naqshadeynta iyo soo saarista noocyo badan oo xirmooyinka beddelaadda nalalka deg-degga ah oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo qalab LED ah iyo qalab.
Shirkaddu waxay xoogga saareysaa kor u qaadista alaabteeda iyada oo loo marayo macaamiisha OEM iyo markii loo baahdo waxay siisaa shaqaale iyo qalab si ay u fuliyaan shaqada wax ka beddelka, sidaas awgeed waxay hubineysaa in xirmooyinka beddelaadda ay si habboon ugu jiraan si waafaqsan heerarka Yurub, Australia, Ameerika iyo Ingiriiska.
Waxaan shaqaaleynaa in kabadan 100 shaqaale maxalli ah waxaanan ku faanaa heerkeena qanacsanaanta gaarsiinta. Badeecooyinkayaga intooda badan waxaa loo diraa bixinta maalinta xigta, sida caadiga ah amar kasta oo la helo ka hor duhurka waxaa loo diri doonaa gaarsiinta maalinta xigta, waqtiga lagu qeexay qiimaha dheeriga ah.
Injineerada adeegga khibrada leh ee Dengfeng waxay bixiyaan adeeg xirfad leh, farsamo ah 'goobta' ah. Qeybaha la soo saaray iyo / ama baakadaha batroolka la bixiyay ayaa si buuxda loo damaanad qaaday.
Markaan u guurnay warshaddeena cufan ee 3300 mitir murabac maanta, macaamiisheennu hadda waxay awood u leeyihiin inay ka faa'iideystaan ​​kororka karti iyo hufnaan ee ay maalgelisay maalgashigan.